Metro neMetrobus Services muIstanbul 4-Zuva reMabiko Kudzora | RayHaber | raillynews
mushaTURKEYDunhu reMarmara34 IstanbulMetro uye Metrobus Services muna 4-Day Mutambo Kungorambidza mu Istanbul
Metro uye Metrobus Services muna 4-Day Mutambo Kungorambidza mu Istanbul
22 / 05 / 2020 34 Istanbul, Railway, GENERAL, KENTİÇİ Rail Systems, musoro wenyaya, Dunhu reMarmara, Metro, TURKEY, chitima
Metro uye metrobus mabasa ekurambidza kwezuva nezuva zororo muIstanbul
Covidien-19 matanho ese anotorwa mukati mechikamu cheTurkey nekuda kwedenda, kubva kuna Eve kuenda kumigwagwa kwemazuva mana uye anogara kuRamadan kumba. Nekurambidzwa kurambidzwa kunozoitwa pakati pemakumi maviri nematatu kusvika makumi maviri muna Chivabvu, vagari veIstanbul vanogara kudzimba dzavo, apo IMM ichange iri pabasa nevashandi zviuru gumi nezvitanhatu kuti guta rigone kushandisa zororo rerunyararo. İBB, iyo ine mukana wekushanda zvakanyanya zvakanaka mumigwagwa isina chinhu uye nzira munzvimbo dzekurambidzwa, ine mukana wekupedzisa mapurojekiti akawanda aunoita nekushandura maitiro e pendem mukana.
Turkey nenyika dzese, kusangana nemazuva mazhinji akasiyana kubva pazuva rinozivikanwa. Vagari veIstanbul vanoshandisa 23 Kubvumbi National Sangano Revana Zuva, 19 Chivabvu Yekurangarira kweAtatürk, Vechidiki neMitambo Yezuva, 1 May Vashandi neSolidarity Zuva vari kumba, sechikamu chechina chezuva rechina kudzoreredzwa kunosanganisira Arife Day, makumi masere nemasere. tichagara pamba pamwe. İBB, yakashandura kurambidzwa kuenda kumba semukana wekushanda zvakanyanya zvakanaka nekuda kwemigwagwa isina vanhu uye nzira, ichave iri pakutanga kwekuchinja kuitira kuti vagari veIstanbul vagare mudzimba dzeEid al-Fitr. Zviuru gumi nezvina 81 veMMM vashandi vachashanda munguva yakatarwa inozoshandiswa pakati pa 23-24-25-26 Chivabvu. Kuwedzera kune zvakakosha zvinodiwa senge zvekufambisa, mvura, gasi rechisikwa nechingwa, İBB, iyo ichaenderera nebasa rayo rekuchengetedza neiriwo yemiriwo nemichero, vakwegura nevakaremara kuchengetedza, mabasa emariro, kuraswa kwekurapa uye kwakasimba tsvina, timu yehutsanana, ALO 13, nzvimbo yekuvaka inoshanda, ichave iri pedyo neIstanbulites, iyo ichapedza zvishoma bittersweet.
186 MABHASI ALIYO YAKASHANYIRWA YEMAHARA
IETT ichaenderera mberi nekutakura vapfuura panguva yeRamadan Mabiko. Pamazuva emabiko kunoiswa nguva yekudzoka pamitsara yebhazi, vafambi vachazotakurwa neMugovera zvichienderana nehurongwa hweMugovera uye nemamwe mazuva muhurongwa hweSvondo. MuMetrobus mutsetse, ndege dzinorongwa kuti dziitwe zvakanyanya mangwanani nemanheru uye zvishoma pakati pezuva. IETT yakagovanawo mabhazi ekuchipatara kwemazuva mana kuti aiswe nguva yekubatira. Ese mabhazi gumi nemasere akapihwa kuzvipatara makumi maviri neshanu muIstanbul, 4 veruzhinji uye makumi maviri neshanu, mumazuva mana. Mabhazi anozonoshanda vashandi vepachipatara munzira kuenda uye nekubva kubasa.
Ndege dzinosvika makumi mapfumbamwe nemakumi manonwe nendege kuEurope neAnatolian kunoenderera nezuva reArife nenguva yemitambo. Izvo zvakarongedzwa kuronga ndege 498 nemotokari 608 nemugovera. NeSvondo, Muvhuro neChipiri, ndege zviuru mazana masere 13 dzichave dzakarongeka nemotokari makumi mana neshanu kunyange makumi mashanu nenomwe. Muchiitiko chekuti kune density mumitsetse, iyo density mumitsetse ine chekuita neyakasiya mota ichaderedzwa. Istanbulites inogona kusvika nzira uye marongero emitsetse yebhazi yavanoda kushandisa kubva iett.gov.tr.
METROBUS TRIP YAKASANGANA YAKABUDA-KUNYORWA
MuMetrobus mutsetse, pachave nemaficha anowanzoitika mangwanani nemanheru. Musi weMugovera, Chivabvu 23, pachave nerwendo maminitsi matatu ega ega pakati pa 06 na10 mangwanani, maminitsi gumi ega ega pakati pegumi nagumi nematanhatu, maminitsi matatu ega ega pakati pegumi nematanhatu. Pachave nerwendo rwese maminitsi makumi maviri pakati pegumi nemakumi maviri nemana.
NeSvondo nemamwe mazuva emabiko, pachave nendege nguva yega yega maminitsi matatu kubva pakati pa06 na10 mangwanani, Chipiri neChitatu, maminitsi gumi ega ega pakati pegumi nagumi nematanhatu, maminetsi matatu pakati pegumi nematanhatu. Pakati pemakumi maviri nemakumi maviri nemaviri, pachave nekubuda kunze kwemaminitsi gumi.
Chivabvu 23 Mugovera Chivabvu 24 Svondo Chivabvu 25 Muvhuro Chivabvu 26 Chipiri
METRO SHIPES HAIZOGADZIRA
Panguva iyo vagari veIstanbul vari kumba, metro masevhisi anoitwa kuti ave nechokwadi chekuti vagari vedu, avo vanosungirwa kushanda nekuda kwebasa ravo rekumanikidza, havabatwe; Pakati pa07: 00-21: 00, pachave nemaminitsi makumi matatu.
Mistakes dzinofanira kushanda:
M1A Yenikapı-Atatürk Airport metro mutsara
M1B Yenikapı-Kirazlı metro mutsara
M2 Yenikapı-Hacıosman metro mutsara
M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metro mutsara
M4 Kadıköy-Tavşantepe metro mutsara
M5 Üsküdar-Çekmeköy metro mutsara
T1 Kabataş- Bağcılar tram mutsara
T4 Topkapı-Masjid-i Selam tram mutsara
Munguva yekudzoka, M6 Levent-Boğaziçi Ü / Hisarüstü metro uye F1 Taksim-Kabataş mafaro emafaro uye T3 Kadıköy- Hakuzove nekushanda pane yefashoni tram, TF1 Maçka-Taşkışla uye TF2 Eyüp-Piyer Loti tambo yemota tambo.
Munguva yekuvhiya, kuronga kwakaitwa nenzira yekusapfuudza makumi maviri neshanu kugaramo zvichienderana nesarudzo dzakapfuura. Vapfuuri vanosungirwa kutevedzera mitemo yekufambidzana munharaunda pazviteshi zvedu uye mota dzakaburitswa neProvince Hwekuchenjera kweDare sarudzo. Pamazuva ekubatira, vanhu makumi mapfumbamwe nemaviri vanoshanda zvakapatsanurwa zuva rega rega.
SEA KUSHANDWA KUCHAITWA MUMAKWAI 6
MuCity Lines, kuchave nemakumi matatu nenhatu nzendo dzinofamba nematanhatu nematanhatu ngarava, ngarava gumi nemumwe uye chikepe chimwe chete chemotokari kwemazuva mana. 4 mitsetse yekushandirwa nevashandi makumi matanhatu nemashanu ndeiyi:
İstinye-Çubuklu Ferry mutsara.
HAPANA DAMBUDZIKO MU GAS DISTRIBUTION
İGDAŞ icharamba ichishanda kuti isvitse gasi rechisikigo kuIstanbulites isina kuvhurika uye zvakachengeteka nemachinjika, zvinosanganisira 7/24 Emergency Response Zvikwata, 187 Natural gesi Emergency Foni Line Centres, kuverenga kwemamita uye zvikwata zvekubhadhara uye zvikwata zvezvinhu.
KUPARADZIRA MUZVANHU ZVOKUTI ZVINONYANYA
Nhabvu Istanbul iri kuunza SWEAT FEST kudzimba neChipiri, Chivabvu 25th, paine application inonzi Zoom, iyo inopindwa nevaya vanoita hupenyu hunhu. Kutora chikamu kune SWEAT FEST, iyo ichaitwa pamwe nemipiro yeSpor Istanbul, iyo inosanganisira chirongwa chakazara kubva pachiyero chekudzidziswa kweHazal Nehir, mazita anozivikanwa ePeppycooky, rimwe remazita anozivikanwa ezvemagariro enhau, Ezgi Özanlar, ane hutano mapikicha, zvine mutsindo kurapwa, uye zvine zvikamu zvega. Ivo vanoda kutora chikamu muchirongwa vachakwanisa kunyoresa pa sporistanbulilesweatfestlive.com.
İSTONI KUPEDZESA KWEMAHARA KUSHANDA
Muzvivakwa mabasa mabasa anoitwa ne İSKİ, yakakwirira-yakasimba masimba zvivakwa zvakagadzirwa muTuzla neHadımköy zvivakwa zve İSTON zvinoshandiswa. İSTON ichaita basa rakazara kuita muzvivakwa zvaro zvekugadzira, sezvakaita nguva yekutaurwa yakambotaurwa.
İSTON, nomusi wa1-23-25, kunze kwezuva rekutanga rehoridhe; Hacı Osman Grove kuchera pasi, Kadıköy Kurbağalıdere Yogurtçu Park Gungwa dhizaini uye nzvimbo pakati peModa, Atatürk Olimpiki nhandare yekutenderera nyika, Beylikdüzü uye Avcılar vanofamba netsoka vanopfuura nekugadziriswa nekugadziriswa, Greater Istanbul Bus terminal padanho gadziriso, Göztepe Metro Station, Kağıthane Metro Station Kupinda Gwara reKuenda. Road Yakasimbiswa Kongiri Wall uye Underpass Kuronga, Yeni Mahalle Metro Station, Karadeniz Mahallesi Metro Station, landscaping, Güngören Kale Center chekufambisa traffic kuronga, Hasan Tahsin Street pedestrian nharaunda nzvimbo kurongeka, IETT Garage uye Havaist Platifomu Nzvimbo Kuvaka, Saltuk Buğrahan Street Concrete Pavement Basa Rokuvaka, Bağlar Caddesi Concrete Pavement Kuvaka, laramlar Caddesi pedestrian nharaunda kuronga, Sarıyer Özdereiçi kuvaka kwemadziro emabwe, Beylikdüzü Cemevi mumigwagwa pombi gadziriro icharamba ichishanda pane nzvimbo nzvimbo dzeguta.
Inoshanda munzvimbo dzakasiyana siyana yekutamba nekugadziridza zvirongwa pasi peDirector of Parks and Gardens zvichapfuurirwazve. Mune ino mamiriro, iyo yakazara ye779 ISTON uye subcontractor vashandi vanozoshanda. Uye zvakare, mabasa ekugadzira anoenderera mberi ku İSTON Hadımköy uye kuTuzla mafekitori muna Chivabvu 25-26.
ISTAC, Istanbul-wide main nzira, makwere, Marmaray uye subway masuo, kupfuura mafambisirwo - pasi, mabhasi chikuva / kumira, Bayrampaşa uye Ataşehir Haller, muchina kushambadzira, muchimiro kutsvaira munzvimbo dzeveruzhinji dzakadai zvipatara uye akasiyana masangano eruzhinji nemasangano. ndichaita basa rinotsvairwa nemaoko. Munguva yemabasa aya, apo vashandi makumi matatu nevaviri vanoshanda, mota dze İSTAÇ dzinenge dziri pabasa kanokwana makumi mana nenomwe. Hurefu hwemamirioni zviuru mazana mashanu nemakumi mashanu emamirita emamirimita (anenge 342 masimu ebhora) achashambwa mumazuva mana, uye mamirioni mazana masere nemakumi masere emamiririta emamirita (anenge 431 nhandare yenhabvu) achacheneswa nekutsvaira nemishini yekushandisa.
NYAYA DZEMADZO DZINOGONYANWA uye DZINOGONESWA
Inoda kusvika makumi maviri nemakumi matatu nematatu emarara ekurapa (ane mana-mazuva akazara matende), kusanganisira nzvimbo dzekugara, dzakarongwa kuti dziunganidzwe nevashandi makumi maviri nevaviri, makumi maviri nemashanu emotokari uye kuraswa nevashandi makumi maviri nevaviri kudivi reAsia neEurope. İSTAÇ ichashandira vagari veIstanbul vane huwandu hwevashandi mazana mashanu nemazana maviri nemazana mashanu pabasa.
HAZVIZVIYE KUTI ZVINOGONESESA MUHYGIENE BASA REMAHARA NEMHARAZO DZESHURE
Zvikwata zvehutsanana zve mobile zve IMM Health department zvichaenderera mberi nehutsanana mabasa muzvikoro zvehurumende nezvipatara. Kuti uzviratidze kwekunze, vashandi vaviri vachashanda kwemazuva mana vaine mota mbiri, ukuwo vashandi vanosvika zana nemashanu vachange vachipfira nemotokari makumi mashanu muguta rose kuitira kurwisa umhutu hwakakonzerwa nekudziya kwemamiriro ekunze.
İBB, inoenderera mberi nehutano hwayo hwekuchengetedzeka pamusha neMuvhuro neChipiri, nevashandi gumi nevaviri uye mota makumi matatu nenomwe, ichashandira Community Mental Health Services nevashandi gumi nevaviri, vatatu vepfungwa nevarapi vepfungwa kwemazuva makumi mana nemana.
ICHI CHINANGWA, CHINOTAURA UYE CHINANGWA
IMM tsika Dhipatimendi inopa hunyanzvi zviitiko, kubva kumakonzati kuenda kumitambo yemitambo, ngano dzevana, panguva yeRamadan Mazuva emitambo neanodzoka nguva. Zvirongwa zvinogovaniswa pama social media account pakati pa 23-26 Chivabvu. Rondedzero yechiitiko yakadai seinotevera:
Mugovera, Chivabvu 23, 2020: 14:00 Mwana Akatendeka, 21:00 Kubvumidza Konsati
Svondo, Chivabvu 24, 2020: 11:00 Fairy Tale Nguva, 15:00 Istanbul Master, Imba Yemitambo, 18:00 Kutamba kweVhiki
Muvhuro, Chivabvu 25, 2020: 10:00 Chirongwa chevhiki, 13:00 Cem Mansur Kurudziro kweVhiki, 20:00 Sumo yeAchaeological Sites muIstanbul
Chipiri, Chivabvu 26, 2020: 16:00 Art Encyclopedia, 20:00 Orchestras Imba Yenyaya
Batsirai MABHUKU ACHANYANYA KUNYANYA VAMWE
Dhipatimendi reRubatsiro Service richapa mafoni ekutakurisa kumakuva mukati memakuva mukati mekushanya kwemakuva kune vanofira vafi. Pamusoro pezvo, kana zvikumbirwa, kudzingiswa kwemotokari kunorongwa kune vanofira kutenda kuti vasvike kune vafira. 270 mota, 270 driver driver vashandi, 270 vashandi vezvemagariro pamwe nevashandi 270 vanoshanda vanozoshanda pazororo kuitira kuendesa mapasuru ekubatsira kuvagari vanoshaya akatemerwa neveSocial Services Directorate.
Mamwe masevhisi eDhipatimendi reRubatsiro Mabasa achaita seanotevera:
- Iyo Logistics Support Center ichaenderera mberi ichishanda maawa makumi maviri nemana pazuva kuti ive nemabasa ekuti mabasa eruzhinji anoitwa pasina kukanganisa uye kuti mabasa eruzhinji anogona kuenderera mberi zvakanaka pasina kukanganisa.
-Izvikafu uye zvinwiwa zvinodikanwa zvevagari mumusasa usina dzimba zvicharamba zvichisangana.
- Mabasa ekugara anoenderera mberi achipiwa kune makumi matatu nemaviri vashandi vehutano paZeytinburnu Socialaziko.
-Zvekudya uye zvinwiwa zvinodikanwa zvevashandi vehutano hwekugara mumahotera zvicharamba zvichisangana.
BASA RINOGADZWA PASI makumi masere nemasere
Kuchinjana kurambidzwa kudzora mikana munzira dzakanyatsoshanda munguva yechirwere, İSKİ ichaenderera mberi ichishanda pamatanho makumi mana nematanhatu panguva ino yemazuva mana. Muchirongwa ichi, İSKİ ichaenderera mberi nemabasa ayo nevarume zviuru nezviuru nemakumi maviri neshanu.
Mamwe masevhisi anofanirwa kupihwa nezvimiro zveIMM musi wa 23-24-25-26 Chivabvu ndeizvi:
İSYÖN AŞ: Gürpınar Zvigadzirwa zvegungwa uye Kadıköy Ichashanda nevashandi makumi mashanu nevaviri paChipiri Msika
ISTANBUL KUSIMBIRA MOTO: 123 zviteshi zvemoto zvichagadzirira basa racho nevane zviuru zviviri nemakumi matanhatu nevatanhatu vashandi uye mota makumi masere nemasere.
ALO 153: Alo 153 Call Center ichave iri pabasa maawa makumi maviri nemaviri pazuva nevashandi mazana mashanu nemakumi mashanu panguva yemutambo.
İSTGÜVEN AŞ: Icharamba ichishanda nevashandi zviuru zvishanu nemazana manomwe nenzvimbo makumi masere nenomwe.
BELTER: Zvipatara makumi mana zvichashandira munzvimbo makumi mashanu neshanu, paine mazana mana evashandi, uye gumi nevaviri City Lines ferry buffets, paine makumi matanhatu nevashandi.
İSFALT AŞ: Kuti uite basa rekugadzira asphalt uye asphalt application application, nevashandi ve915; 260 vashandi vanozove vari saiti yekuuraya hutachiona. Asphalt application inoshanda ichaenderera zvakanyanya zvakanyanya mumatunhu gumi nemana eIstanbul. KadıköyTani anosvika zviuru gumi nemazana matatu nemazana mazana matatu emazana mana emafuta asphalt akarongwa kune migwagwa yeKartal, Beykoz, Şile, Maltepe, Ümraniye, Bağcılar, Bayrampaşa, Arnavutköy, Silivri uye Büyükçekmece.
AĞAÇ AŞ: Icharamba ichishanda pakukanda nzvimbo uye nekutarisa nzvimbo nemotokari mazana matatu nemakumi matatu nenomwe uye vashandi zana nemakumi mashanu nenzvimbo munzvimbo dzegirinhi kuyambuka Istanbul.
İSBAK AŞ: Iyo metro siginecha, anoratidza masystem, programming, application, kuiswa uye kushanda ichaenderera ne161 vashandi muguta rose.
İSPER AŞ: Chipatara, Hutano hwepamusha, Zvemagariro, Mapurisa, Kunze Kuongorora uye Kurapa, İSKİ, Dziviriro Basa, Basa Rekuvanzika, Zviitiko Zvevana, Vechidiki Nemitambo, Ruzhinji Kufambidzana, Dhairekesheni yeHurumende, Hızır Emergency, İGDAŞ, Kurapa Kwemhuri uye Dzidzo Tichaenderera mberi nekushandira Istanbul uye Istanbul vagari vane pamusoro pezviuru zvina zvevashandi vanoshanda muVakadzi Mhuri Services, Orchestras uye Theatre, Kudzoreredzwa Kwemhuka dzeNherera.
UAV: Pa 1st uye 4th mazuva ekubvumirwa, Istanbul Halk Ekmek acharamba achishanda zvakakwana vashandi vedu 3 mafekitori, 514 buffets uye 353 vashandi. Buffets ichavharwa musi 1 uye 2nd mazuva ezororo (Svondo, Chivabvu 24 uye Muvhuro, Chivabvu 25), sekugadzirwa kwechingwa hakuzoitwa.
I İSTTELKO: Kuti uchengetedze zvigadzirwa zvese zvekukurukurirana pasina kukanganisa, makumi matanhatu neshizha mahunyanzvi vachashandiswa, gumi nemaviri muDatha Center services, makumi matatu mumasevhisi eWIFI, masere muRADIO masevhisi, matanhatu mumasevhisi eIT uye gumi nematanhatu muResource Services.
IMM OFFICER: Munguva yose yemazuva mana yekudzoka, vanhu zviuru makumi maviri nevaviri, mota 87 nezvikwata makumi maviri nemaviri zvichashanda mukuchinja, kure uye neimwe nzira. Ichapa masevhisi munzvimbo dzakawanda kubva mukudzora kwenzvimbo dzebasa dzinofanira kuvharwa kumusangano weizvo zvekufambisa zvevashandi vehutano.
BOĞAZİÇİ YÖNETİM AŞ: Kuchenesa uye kuchengetedza masevhisi anoenderera mberi kunzvimbo dzinonetsa dzeIstanbul panguva yemangwanani uye emazororo. Chikwata chevanhu 386 vanhu, vanonyanya kuchenesa uye nehunyanzvi, vachange vari mumunda mune zveIMM masevhisi zvikamu, vanobatana uye nzvimbo dzinoshandiswa neIstanbulites.
İSPARK AŞ: İSPARK yokupaka nzvimbo ichavharwa kuti ishandwe. Nekudaro, kuitira kudzivirira chero matambudziko pamazuva ekurambidzwa, vashandi makumi matatu nevaviri vakakwana, kusanganisira Hofisi, Vamwe Vanovhura uye Vachengeti Mota Mota, Alibeyköy Cep Bus Station P + R, İstinye uye Tarabya Marina, Bayrampaşa Vegetable-Fruit Market neKozyatağı Vegetable-Fatso Market. ichave iripo.
HAMİDİYE AŞ: Iko hakuzove nekugadzirwa uye kutumira pazuva rekutanga kwehoridhe muna Chivabvu 24. Pane mamwe mazuva, mimwe michina ichagadzirwa inoenderana nechirongwa chekugadzira. Kunze kwekunge paine kudiwa nekukurumidza, vashandi vemuoffice havazoshande pamazuva iwayo ekudzoka. 167 vatengesi vanoenderera mberi nebasa ravo muna Chivabvu 263-760-23 vane 25 mota uye mazana manomwe evashandi.
IMM CEMETERS DZIDZO: Ichashanda nevashandi vangangosvika chiuru nemazana maviri nemakumi mairi nemazana matatu nemotokari dzesevhisi kuitira kuti mabasa arambe ari pasi.
Metrobus akaramba ari munzira ... Metrobus yakatora hupenyu ... Metrobus yakaita seiyi, metrobus yakaita seiyi, chii ichi ...
Chii chichave chakavhurwa mumazuva matatu ekuvharirwa kutenderwa ..? Heano maitiro
Giant Kukumbira Pamberi pe-3-Zuva Curfew!
4 Pre-Turkey Zuva Kurambidzwa Runyararo Kuvimba Kwesimba Kwakaitwa
Zuva rechina Pre Prevention
3 Daily Festival Yezororo Balance muMugwagwa 49 Vakafa, 206 Vakakuvadzwa
Zvinoita sei kuti Metro, Ankaray uye EGO Bhazi Rudungwe rive mu Ankara ye 4-Zuva rekudzora?
IETT Expeditions Ichapfuurira Pakati Pese Nguva Yekubva
Subway Expedition Maawa muIstanbul ye4-Zuva Rekudzora
Zvimwe zvikwata zveYHT kuenda kuAnkara-Istanbul nzira yeBayram Holiday
Istanbul motokari haisi kuzova nhau dzezuva nezuva | Istanbul Metrorail Forum uye Exhibition
Chirevo pamusoro peCarfew Rokudzora kubva kuIstanbul Governorship
ISTANBUL METROPOLITAN MUNICIPALITY: Bus metro uye metrobus ndege
Metrobus yebasa rinopindirana pazororo
nzendo dzezvikepe pamabiko
ASELSAN's Network Yakatsigirwa Talent Project Yakashandiswa muNATO Exercise
Kadıköy Ferry Boat inogadziriswa kubva kumusoro kuenda kumusoro
Buca Metro Project 1 iri kumirira 3 yebhizimisi rezuva nezuva
ANKARAY neMetro zvinoshanda pasi peZina-Mazuva Ekudzora?
Basa rebhazi rezuva nezuva rinotanga kuna Erciyes Mountain
Road Lines Yakagadzirwazve muCurfew muDenizli